Waxsansheeg News - Waa maxay midab soosaarka foolataytka dheer kadib?
Sidoo kale loo yaqaan: ku iftiimiya budada mugdiga ah, midabka luminta, budada loo yaqaan 'Fluresrescent powder'
Midabkayaga dheer ee iftiinka leh ee iftiinka-luminescent waa midda loo yaqaan 'strontium aluminate' ee ku saleysan budada nalka lehwuxuu soosaaraa iftiinka iyadoo la nuugo nalalka kala duwan ee la arki karo hadana si isdaba joog ah ayaa loo isticmaali karaa. Alaabadaasi kuma jiraan wax walxaha iftiimiya waxayna si siman ugu faafin karaan walxo ka dhex muuqanaya sida daaha, khad, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiber-ka si loo dardar geliyo howlaha soosaarayaasha wakiilada.
Midabka noocan ahi wuxuu ku qaataa midabkiisa dabiiciga ah meelaha meelaha dhalaalaya wuxuuna soo saaraa midabbo kala duwan oo nalal ah oo mugdi ah. Waxaa loo isticmaali karaa iftiinka deg degga ah, calaamadaha muujinta iyo qurxinta.
SrMgAl4O8: Eu2 + Dy3 +, Sr2MgSi2O7: Sr4Al4O25: Eu, Dy iwm.
Midab badan oo dhalaalaya: buluug-cagaaran, buluug-cagaaran, cirka-buluug, violet iwm.
Noocayaga caanka ah ee hadda jira
Iftiimin(mcd / m2)
Waqti dambe kadib Min
Cabbirka qayb ahaan (um D50)
Dhexroor walxaha ugu badan
Jaale / cagaar
Sky-buluug RBT-20 '
Waqtiga boostada: Jul-10-2020